Indlela Yenethiwekhi IP Ikhamera Indlela Yokuxazulula Ukuxazulula Izinkinga
I-Network IP Camera Ukuxhuma Ukuxazulula inkinga Ukuxazulula inkinga
1. Ikhamera ye-IP ye-Infrared IP isebenza ngokujwayelekile phakathi nosuku, kepha akunasibonakaliso ebusuku.
Isizathu: Ukuhlinzekwa kwamandla akwanele. Njengoba ukukhanya kwe-infrared kuvulwa ebusuku, ukukhanya kwe-infrared kuzodla inani elithile lamanje. Uma ikhwalithi yamandla ingalungile, ukunikezwa kwamandla kuzobe kunganele, okuholela kwikhamera yenethiwekhi ye-HD ayiqali ngokujwayelekile.
Isixazululo: Faka okunye esikhundleni samandla wamanje bese uwufaka esikhundleni sokuhlinzekwa kwamandla wekhwalithi enhle.
2. Ikhamera yenethiwekhi ye-HD ivame ukwehliswa ngokungaqiniseki
Isizathu 1: Ikhamera yamukela imodi yokunikezela ngamandla.Izidingo zekhamera yenethiwekhi enencazelo ephezulu ye-adaptha yamandla iphakeme kakhulu kunaleyo yekhamera ye-analog. Kudinga i-voltage eguqukayo futhi yamanje, kanye namandla kagesi futhi okwamanje awazinzile ngenxa yokunikezwa kwamandla okuphakathi. Ikhamera yenethiwekhi ye-HD't Qalwa kabusha noma uqale.
Isixazululo: Shintshela ekunikezelweni kwamandla ahlukile bese usebenzisa ukunikezwa kwamandla aphezulu kwekhwalithi
Isizathu 2: Izinga lekhebula lenethiwekhi limpofu.Ividiyo enencazelo ephezulu idinga isilinganiso sokudlulisa senethiwekhi ephezulu. Ngakho-ke, ukulahleka kwephakethe lenethiwekhi kuzobonakala kakhulu. Isibonelo, ikhebula livame ukwehliswa, futhi isithombe asiboniswa nhlobo.
Isixazululo: Sebenzisa ikhebula elijwayelekile le-Cure Copper elijwayelekile
Isizathu 3: Ibanga phakathi kwekhamera ye-HD IP kanye nokushintsha, noma phakathi kokushintshana kanye nokushintsha, noma phakathi kwekhamera ye-IP noma i-HD NVR kungaphezulu kwamamitha ayi-100.
Isixazululo: Ungangeza i-switch ngomsebenzi odluliselwe maphakathi namamitha ayi-100, noma usebenzise ukudluliswa kwe-fiber.
Isizathu 4: Ikheli le-IP lingqubuzana phakathi kwekhamera yenethiwekhi ye-HD namanye amadivaysi enethiwekhi e-LAN.
Isixazululo: Shintsha ikheli le-IP lekhamera yenethiwekhi yezokuphepha noma enye insiza yenethiwekhi ukuqinisekisa ukuthi ikheli le-IP alingqubuzani.
Isizathu 5: I-bandwidth yokushintshwa kwenethiwekhi ayanele.
Isixazululo: Uma inani lamakhamera wenethiwekhi ye-HD likhulu, kunconyelwa ukusebenzisa ukushintshwa kwe-H3C Full Gigabit. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi hhayi kuphela i-Central Shintsha i-Adopts Gigabit, kepha uma i-Front-End switch inamakhamera angaphezu kwama-7, kuyanconywa futhi ukusebenzisa ukushintshwa kwe-gigabit.
PHAMBI Ungayixazulula kanjani inkinga yokuhlola ukuphepha okufile i-angle efile?
Uhlelo lokuqashelwa kobuso luvule i- "Brush Face Redraway" Times " OLANDELAYO